အလန်းစား ရိုက်ချက်တွေနဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ. သီချင်း အသစ် Hollywood Music Video | Buzzy
အလန်းစား ရိုက်ချက်တွေနဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ. သီချင်း အသစ် Hollywood Music Video
စန္ဒီမြင့်လွင်တစ်ယောက် Queen Music Album ထွက်၇ှိခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အဲ့ဒီထဲက အလန်းစား သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Hollywood Music Video ကို အွန်လိုင်းပေါ် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီသီချင်းထဲမှာတော့ အေးမြတ်သူ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ စန္ဒီမြင့်လွင် တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
စန်ဒီမွငျ့လှငျတဈယောကျ Queen Music Album ထှကျရှိခွငျး အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ အဲ့ဒီထဲက အလနျးစား သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ Hollywood Music Video ကို အှနျလိုငျးပျေါ တငျပေးလိုကျတာပါ။ ဒီသီခငျြးထဲမှာတော့ အေးမွတျသူ၊ သငျဇာဝငျ့ကြျော၊ စန်ဒီမွငျ့လှငျ တို့က ပါဝငျသရုပျဆောငျပေးထားပါတယျ။
Source : စန္ဒီမြင့်လွင် ဖေ့စ်ဘုခ်